Allgedo.com » 2011 » April » 17
Home » Archive Daily April 17th, 2011 Xaflad sagootin ah oo galabta xafiiska Ra’isal Wasaaraha Dowladda KMG ah loogu sameeyay gabdhaha Kubadda Koleyga ee Muqdisho City (Sawiro) Apr 17, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xaflad sagootin ah ayaa galabta loogu sameeyay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Gabdhaha Kubadda Koleyga (Bassket ball) ee Muqdisho City kuwaasoo maalinta berri ah la filayo inay ka ambabaxaan magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasoo ay uga qeyb galayaan tartanka Intercity Cup (Caasimaddaha) oo 19.04.2011 halkaasi ka furmi doona. Munaasabadan... Dr. Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi “Sharif Sh. Axmed waxuu Meles Zenawi ka codsaday in uu dalka Soomaaliya u qabto” “Dhageyso wareysi” Apr 17, 2011 Guddoomiyaha Ururka Dib u xoreynta Soomaaliya Dr. Sakariye Maxamuud X. Cabdi oo sheegay inuu hayo xog ku saabsan arrin ay ka wada hadleen madaxweynaha Dowladda KMG ah Shariif Sh. Axmed iyo Ra’isal Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi.
Halkan ka dhageyso wareysiga uu Dr. Sakariye Maxamuud X. Cabdi siiyay Radio Hormuud. Madaxweynaha... Halkan ka akhri warqad kasoo baxday Maxkamadda Gobolka Banaadir, qeybta danbiyada culus oo ay xabsiga uga sii daysay Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) Apr 17, 2011 March 28, 2011 ayaa waxay maxkamadda gobolka Banaadir, Qaybta Danbiyada Culus magaalada Muqdisho ka furtay dacwad ciqaab ah oo liddi ku ah eedaysane Maxamed Cumar Xabeed (Maxamed Dheere).
Sida ku cad go’aanka Maxkamadda gobolka Banaadir kasoo baxay, Dhageysi dheer kaddib, waxay maxkamaddu amar ku bixisay in eedaysane Maxamed Dheere xabsiga si deg-deg ah looga sii daayo haddii uusan danbi kale... Guddoomiye ku xigeenka Ahlusuna Sheikh Aw-libaax oo sheegay in ay tagersan yihiin shirka ay xukuumadda Farmaajo ku qabanayso Muqdisho Kana waramay shirkii wada tashiga ee ka dhacay Nairobi Apr 17, 2011 Nairobi, Kenya (AOL) – Gudomiye Kuxigeenka AhlusunaWaljameeca Sh. Maxamed Aw-Libaax oo Saxafada ugu waramayay asagoo ku sugaan Magalada Nairobi ee Xarunta Wadanka Kenya ayaa waxaa uu ka war bixiyay Shirkii Wada tashiga Somalida ee lagu qabtay Magalada Nairobi iyo Mowqifka Ahlusuna ee Shirkii ay Xukmada Farmaajo ku baaqday in lagu qabto magalada Muqdisho.
Aw-libaax ayaa waxaa uu sheegaay... Shariif Xasan oo Muqdisho kusoo laabtay bilaabayna abaabul siyaasadeed oo uu rabo inuu ku kasbado inta badan golaha baarlamaanka Apr 17, 2011 Loolan siyaasadeed oo aad u xoogan ayaa ka bilaawday magaalada Muqdisho kadib markii ay magaalada kusoo wada aruureen siyaasiyiinta dowladda ee is khilaafsan.
Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta dib ugusoo laabtay magaalada Muqdisho kadib safaro ay dibadda ku aadeen.
Dibad baxyo iskasoo kala horjeeda ayaa looga hortegay Shariif Xasan Sheekh... Caabud-Waaq oo Isgaarsiintiisa caadi tahay iyo Dhuusamareeb oo Taarar la’iskula hadlo kadib markii.. (Warbixin). Apr 17, 2011 Waxaa wali hakad ku jira Isticmaalka isgaarsiinta magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka G/gaduud kadib markii shalay Ururka Ahlu sunaha ay amaro duldhigeen shirkada Ka howlgala degaanada ay maamulaan.
In ka badan 24 saac ayaan wax isgaarsiin ah laga isticmaaleyn deegaano hoostaga G/gaduud sida Dhusamareeb, Guriceel iyo Matabaan iyadoo uu go’ay xiriirka bulshada ku dhaqan deegaanadaasi.
Shirkadaha... Radio Allgedo/ Waraysiyo